के कारणले भएको थियो काठमाडौंकै कलेजमा ग्याङ फा’इट ? कारण सुन्दा प्रिन्सिपल छक्क ! – Ujyaalo Patrika
उमेर आनुसार केटाहरुमा जाेस् हुनु सामान्य कुरा हो। तर अहिले आफ्नै उमेरका केटाहरु जम्मा भएर पुरै हल्ला गर्दै र अरुलाई म खतरा हुँ भन्न यति पनि पछाडी पर्दैनन्।
Previous सुनाकोटि देखि लगनखेलका लागि हिडेकी ५० वर्षीय सुखलसी राई सम्पर्कविहीन